PAX 3 - Anyị na-enyocha ihe kachasị adịchaghị mma vaporizer | Akụkọ akụrụngwa
PAX 3 - Anyị na-enyocha ezigbo vaporizer kachasị mma
Nhicha abụrụla "smart", ịgbanye ọkụ abụrụla "smart", usoro nri abụrụla "smart" ... Kedu mgbe ịse anwụrụ ga - enweta "smart"? Nke ahụ mere na mwepụta nke PAX 3, vaporizer jikọtara ya na ngwaọrụ mkpanaka anyị nke na - eme ọ bụghị naanị ahụmịhe dị elu, kamakwa nke ejikọtara.
Anyị nwere PAX 3 n'aka anyị, onye nwere ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi nke iji nwee ahụmịhe na njikọ njikọta. Nọnyere anyị ma chọpụta ihe pụrụ iche gbasara ngwaọrụ a na-achọ ịmata ihe na ihe kpatara ọ jiri bụrụ ngwaahịa "adịchaghị" n'oge adịghị anya.
Na Actualidad Gadget anyị bu n'obi na-ewetara gị ihe ọhụụ na teknụzụ ọ bụla, ihe niile ga - adịkwa mfe ma ọ bụrụ na ijikọ. Anyị enyochawo njikọ brooms, ndị ọkà okwu ejikọtara, ndị na-ehichapụ ihe nhicha… gịnị kpatara na vaporizer ejikọrọ? Ndị na-emepụta PAX chere na nke a, anyị nwere ọgbọ nke atọ ha. Chọpụta anyị ihe nzuzo ya, omume ọma ya na ntụpọ ya. Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike, nke a bụ njikọ iji zụta ọnụahịa kacha mma.
1 Nzube na ihe: O bu ihe mbu
2 Gịnị bụ vaporizer na olee otu PAX a si eme?
3 Ihe ngwugwu na otu esi eji ya
4 PAX Vapor App - Ngwunye gị dị mma ugbu a
5 Echiche na ahụmịhe onye ọrụ
Nzube na ihe: O bu ihe mbu
Anyị nwere a cylindrical ngwaọrụ a agafeghị oke size, kpomkwem ihe nha bụ 9,8 x 3 x 2,16 centimeters na ọ dị naanị 39 gram. A na-ewu ya na anodized aluminom maka mkpuchi dị n'èzí, ebe njedebe bụ site na ngwa nke ngwa anyị na-edebe, nke na-adịchaghị ole na ole. Anyị ga-enwe ike inweta ya na agba anọ: Matte Black; Rose Gold; Silver na Teal, na oge anyi choro maka nkpuru ahihia a, ihe omuma Teal, maka nyocha di omimi banyere ya.
Nha: X x 9,8 3 2,16 cm
Ibu ibu: 93 grams
Na azụ anyị nwere magnetized njikọ pin maka chaja, mgbe n'ihu akụkụ bụ okpueze site "X" (maka PAX), nke n'aka nke na-eme dị ka ihe ikanam egosi na nke anyị nwere ike ịmata ya ọnọdụ mgbe niile. Arụmọrụ larịị , batrị na ọtụtụ ndị ọzọ. The na-aka obi na-adị bụ n'otu ntabi anya, ọ na-magburu onwe wuru na maa ọzọ anya-akụta karịa ihe ọ bụla ọzọ ngwaahịa. yiri site na asọmpi ahụ. Na imewe na obere, ọ dị elu nke ụzọ ndị ọzọ dị n'ahịa.
Gịnị bụ vaporizer na olee otu PAX a si eme?
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, otu ite anwụrụ ọkụ na-arụ ọrụ yikwara ka nke anwụrụ ọkụ elektrọnik ọ bụla. N’ezie ha nwere usoro nke ihe eji eme ihe na batrị nwere ike ịweghachi ọkụ, nke na-eme ka ngwaahịa achọrọ ha ruo mgbe arụpụtara alụlụ. Agbanyeghị, PAX 3 a nwere ọdịiche pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị ọzọ, emebere ya ka ọ gbapuo epupụta rụrụ arụ, ya bụ, ihe okike anyị na-ewebata ozugbo n'ime ite ebe ha dị ọkụ ka anyị wee see anwụrụ ọkụ mkpa osisi, na mgbakwunye na gụnyere a nnukwu efere ebe ị nwere ike ịgụnye ụtụtụ.
PAX 3 nwere batrị 3.500 mAh ga-ekpo a stovu nwere ike n'etiti 0,15 gram na gram 0,4 dabere na okpu anyị na-eji (gụnyere na mkpọ) yana ihe anyị kpebiri ị decideụ sịga. Omume ikpo ọkụ nke PAX a na batrị 3.500 mAh ya na-enye ihe dị ka nkeji 100 iji ihe dị ka nkeji 90 nke ịkwụ ụgwọ.
Ihe ngwugwu na otu esi eji ya
Anyị natara zuru ezu PAX 3 kit gụnyere:
Magnetik odori isi na USB
Mkpuchi maka ịtinye ụtụtụ
Ihe mkpuchi ọkara maka stovu
Mkpuchi mkpuchi zuru ezu maka stovu
Onu uzo mbu
Ingpị na ihicha ngwá ọrụ
Iji ya dị mfe, Ihe mbụ anyị kwadoro bụ ụgwọ zuru oke na ịhọrọ ụdị ụdị ọnụ ị ga-eji, maka ndị ọrụ oge mbụ ihe ọ bụla dịka ọnụ nke mbụ. Mgbe ahụ, anyị na-ahọrọ ngwaahịa anyị ga-etinye na nnukwu efere: ahịhịa dị mkpa ma ọ bụ itinye uche. Anyị na-eji mkpuchi kwekọrọ, pịa ngwaahịa (ma ọ bụrụ na ha bụ ahịhịa) ma webata ọdịnaya. Ọ dị mkpa na ọ na-agbanyụ ka ọ ghara ịtụ anyị ụjọ.
Ugbu a, anyị ga-pịa bọtịnụ ike. Mgbe anyị gbanyere ya ga-anọ ihe dị ka 15 sekọnd na ikanam na-acha odo odo (ihe ngosi ọkụ), mgbe ọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ na anyị zuru oke ị smokeụ sịga. Otu ihe a na-eme nhazi ọnọdụ okpomọkụ, anyị nwere anọ: Ọkwa 1 - 182ºC; Ọkwa 2 - 193 Celsius C; Ọkwa 3 - 204ºC na ọkwa 5 - 215ºC. Iji hazie ya, anyị ga-pịa ma jide bọtịnụ ike maka sekọnd ole na ole na pịa ọ bụla ga-ahọrọ ọkwa (ma ọ bụ na anyị na-eme ya ozugbo site na ngwa PAX.
PAX Vapor App - Ngwunye gị dị mma ugbu a
Na PAX 3 anyị nwere ngwa dịnụ iOS na maka android nke ga - enyere anyị aka ịhọrọ n’ime ọnọdụ okpomọkụ zuru oke ozugbo anyị jikọtara PAX 3 anyị na ngwaọrụ mkpanaka site na njikọ Bluetooth, ọ dịkwa mfe. Ozugbo n'ime, anyị nwere ụdị mgbanwe dị iche iche maka ọkụ ọkụ ọkụ (nchikota ọbara ọbara, odo na acha anụnụ anụnụ). Anyị nwekwara ike ịhazigharị akara ule na mmasị anyị ma merie, mana ọ bụ ihe amamihe dị na iji ohere ndabara nke PAX na-enye anyị.
Anyị tumadi nwere ndị na-esonụ ụdịdị:
agbam ume Kpụrụ: Na-eme ka stovu ahụ dị ọkụ maka nnọkọ ngwa ngwa na anwụrụ ọkụ
arụmọrụ :Kpụrụ: Jiri nke nta nke nta mụbaa ike nke afụnwu ọkụ iji pịpụta ahịhịa ya
flavor Kpụrụ: Na-ekpo ọkụ n'ekwú ahụ mgbe ị na-enwe agụụ maka ụtọ ka mma na uzuoku na-adịkwu ụtọ
stealth Ọnọdụ: Jụọ ngwa ngwa maka ịse anwụrụ.
Ihe mbụ bụ icheta, tAnyị ga-enwe mmetuta dị iche karịa nke anwụrụ ọdịnala ma ọ bụ vape nwere mmiri mmiri, Ebe ọ bụ na ego uzuoku dị obere, ọdịnaya nke puff ọ bụla adịghị.
Echiche na ahụmịhe onye ọrụ
Dị ka m si eji, a na-ezute akụkụ ndị a mara ọkwa maka ngwaahịa a, ma na ọkwa nke njikọta yana n'ogo nke nnwere onwe na arụmọrụ. Ọ bụ obere mmetụta ị ga - eji mee ihe, mana ihe dị mkpa bụ nhazi na ikike ịhazi aha ya site na njikọta nwere ọgụgụ isi nke ngwa ya na-enye, dị mfe iji ma kensinammuo. O doro anya na ọ bụghị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị lelee nhọrọ ndị ọzọ na ahịa, mana dịka anyị kwuru site na mmalite, nke a bụ ngwaahịa kachasị elu. Nwere ike ịme onwe gị ya na euro 199 na Amazon n'ihi na ụzọ kachasị mma iji nwalee ihe niile, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụ na ngwaọrụ ejikọrọ na ọgụgụ isi nke na-akwado ụbọchị gị kwa ụbọchị, dị ka mgbe niile, na Actualidad Gadget.
Ejiji dị elu na ihe dị iche iche
Customizable site na App
Nnwere onwe dị ịrịba ama
Mgbe ụfọdụ ọ na-ekpo oke ọkụ
Ihe mgbagwoju anya maka ndị chọrọ ịnwale
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » PAX 3 - Anyị na-enyocha ezigbo vaporizer kachasị mma
Fosil Sport Smartwatch, uzo ozo di na Wear OS [AKW ]KWỌ]
Huawei ga-eweghachi ndị ọrụ ego ma ọ bụrụ na ha enweghị ike iji ngwa Facebook ma ọ bụ Google rụọ ọrụ na ekwentị ha